Posted by Tranquillus | Jul 14, 2021 | Shabakada
Si aad u barato Boortaqiis, waa muhiim in diirada la saaro ku dhawaaqisteeda. Waxaad arki doontaa in Ku dhawaaqida Boortaqiiska kuma adka dadka ku hadla Faransiiska, maxaa yeelay inta badan xarfaha waxaa loogu dhawaaqaa si la mid ah tan Faransiiska! Intaas waxaa sii dheer, codad badan (dhawaaqyada xarafka ama isku dhafka xarfaha) sidoo kale waa isku mid. Dabcan, ku dhawaaqida afka Burtuqiiska way ku kala duwan tahay hadba halka aad aadeyso, laakiin hagahan ku dhawaaqida Burtuqiiska wuxuu kuu oggolaanayaa inaad is muujiso oo meel walba lagaa fahmo. Kaalay oo soo ogaado Bortuqiis reer Brasil ah ! Ku dhawaaqida Boortaqiiska: waxaad ubaahantahay oo dhan inaad ogaato inaad sifiican uguhadasho.
In ka badan 230 milyan oo ku hadla afka hooyo oo ku hadla afkan ku dhowaad qaarad kasta (Aasiya, Yurub, Afrika, iyo halka ugu badan, Ameerika), Boortaqiisku wuxuu ka mid yahay luuqadaha loogu hadlo adduunka. Sidaas darteed waa wax dabiici ah in la barto. Sidaas awgeed waxaan xiiseyn doonnaa halkan Ku dhawaaqida Boortaqiiska ee Brasil, waddanka ay ku hadlaan kuwa ugu badan ee ku hadla Boortaqiiska. Laakiin ha walwelin, dadka ku hadla Boortaqiiska ee wadamada kale waxay si fiican kuu fahmi doonaan sidoo kale, haddii aad rabto inaad u safarto Portugal ama Angola tusaale ahaan.
In la ogaado sida loogu dhawaaqo
Ku dhawaaqida Boortaqiiska: baro inaad ugu hadasho Boortaqiiska sida hooyo Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ La qabso booska shaqaalaha xaaladdooda
horeSidee loo ilaaliyaa heerka wanaagsan ee Ingiriisiga… marka aadan fursad u helin inaad ku hadasho?
socdaHagahayaga hordhaca ah ee luqadda Jabbaan